शक्तिको आडमा पुजालाई जवर्जस्ती मानसिक रोगी बनाउँदै मेनुका , न्याय दिन्छु भन्ने बाबुराम कता हराए ? | My News Nepal
काठमाडौं । सामूहिक बलात्कार पीडित किशोरी पुजा बोहोरामाथि रक्षा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको शोषण र यातनाका सम्वन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले दुबै पक्षसँग सोधपुछ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीका निजी सचिव अञ्जु ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापामाथि अनुसन्धान गर्नु भन्दा पनि पुजालाई रक्षा नेपालकै शरणमा पठाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार समितिले पीडित पुजालाई रक्षा नेपालले खर्च व्यहोर्ने गरी साथी नामक संस्थामा पठाउने तयारी गरेको छ । यस सम्बन्धमा पुजाले भनिन्,‘म रक्षा नेपालमा फर्केर जान्न, न त म साथी भन्ने संस्थामा नै जान चाहान्छु, दोषीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, सञ्चारमाध्यममा रक्षा नेपालमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण नगरी कसैलाई चोख्याउने प्रयास गरिन्छ भने म अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु ।’ समितिमा केन्द्रिय बालकल्याण समिति तर्फबाट सुनिता साह, महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तर्फबाट अधिकृत अनिता अधिकारी र चाइल्ड हेल्प लाइनको तर्फबाट देवी खतिवडा सदस्य रहेका छन् ।
पुजामाथि रक्षा नेपालले गरेको अत्याचार सार्वजनिक भएपछि छानविन समिति थापामाथि लागेको आरोप छिपाउन उद्यत देखिएको छ । पुजाले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरी रक्षा नेपालको नाममा मेनुकाले निजी सम्पत्ति जोडेको र त्यहाँ भित्रका अन्य बालबालिकाहरुलाई पनि विभिन्न खालका यातना दिने गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर, ति विषयमा समितिले अहिलेसम्म छानविन नै नगरेको स्रोत बताउँछ ।
संस्थाको कोषाध्यक्षको पनि करोडौं पर्ने महल सातदोबाटोमा रहेको छ । संस्थाका पदाधिकारीले गरेको आर्थिक हिनामिना समेत छानविन समितिले अहिलेसम्म छानविन नै गरेको छैन् । संस्था र उनको नाममा रहेका खाताबाट रकम निकाली आर्थिक दूरुपयोग भइरहेको बारेमा पनि समिति मौन छ । उनले आफ्नो नाममा जोडेको जग्गा बैंकमा धितो राखी तीन करोड ऋण लिएको बताएकी थिइन् । तर, एउटा सामाजिक संस्था चलाउने व्यक्तिले उक्त ऋण कसरी चुक्ता गर्न सक्छ ? संस्थालाई भन्दा किन ब्यक्तिलाई बैंकले विश्वास ग-यो ? थापाले ऋण तिर्न सक्ने आधारहरु के के हुन् ? के उनी ब्यवसायी हुन् ? सो सम्वन्धमा बैंकमा पुगेर छानविन हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।
पुजाले पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले उनको मात्र नभई सबै बालबालिकाको फेसबुक आफैले चलाउने गरेको सार्वजनिक गरेकी थिइन । थापाले फेसबुकमार्फत विभिन्न विषयमा आफुखुसी पोष्ट गर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन । सो बिषयमा समितिले छानविन गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । रक्षा नेपालका कम्यूटर, उनले चलाउने ल्यापटप र मोबाइल जफत गरेर अनुसन्धान गरिए थापाको सारा कर्तुत बाहिर आउने पीडितहरु बताउँछन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले समेत छोरी बनाएकी पुजा बोहरा न्यायका लागि भीख मागिरहेकी छन् । उनले दोषीमाथि छानविन गरी कारबाही हुनुप¥यो भनिरहेकी छन् । सोही अनुसार उनले न्यायका लागि डा. भट्टराईलाई भेटेर सवै यथार्थ जानकारी गराइन । डा. भट्टराईले सहयोग गर्छु भन्ने बचन पनि दिए ।
तर, पुजाले भेटेर आएको भोलीपल्टदेखि डा. भट्टराई सम्पर्क नभएको बताउँछिन् । कुनै बेला उनले पुजालाई छोरी स्वीकार्दै ५० हजार रुपैयाँ नगद पनि दिएका थिए । पुजालाई छोरी नै बनाएका भट्टराईले आश्वसन मात्र दिएपछि पुजा थप विक्षिप्त बनेकी छन् । डा. भट्राईले रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापा विरुद्द जान नसक्नुको रहस्य भने अर्कै रहेछ । त्यो हो, अध्यक्ष थापा नयाँ शक्ति पार्टीकै केन्द्रिय सदस्य । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )